घरमा यी बिरुवा राख्नुभयो भने पैसाको बर्षा हुनेछ : यी हुन् भाग्य सूचक वा पैसा फलाउने बोट – Sandesh Press
August 29, 2021 202
काठमाडौँ । सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन ।
यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस् । यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ । विषेश खोजका साथ जो कोही मानिसलाई उपयोगी यो सामाग्री तयार पारेका छौ । आशा छ । तपाई आफुले पढिसकेपछि अरुका लागि सेयर गरिदिनुहुनेछ
Prev४० कटेपछि किन राख्छन् प्रायजसो महिलाले विवाहेत्तर सम्बन्ध ? यस्ता छन् कारण
Nextशास्त्र अनुसार जान्नुहोस् कुन बार कुन काम गर्दा शुभ ?